सेनाका बख्तरबन्द गाडी सडकमा निस्कने
विश्वकै सबैभन्दा लामो लिं ग धारी पुरुष सडकमा माग्दै…
ईन्द्रदेवको आगमनले फेरिएको अमरसिंह : निजीभन्दा तुलनात्मक रूपले अब्बल विद्यालय - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
गृहपेज » फिचर »
ईन्द्रदेवको आगमनले फेरिएको अमरसिंह : निजीभन्दा तुलनात्मक रूपले अब्बल विद्यालय
सोमबार, साउन ४ २०७८
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–५ साहेगञ्जमा अवस्थित अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय अब पुरानोजस्तो रहेन । वि.सं २००७ मा स्थापित उक्त विद्यालय आजभन्दा सात वर्ष अगाडिसम्म सरकारी विद्यालयजस्तै रह्यो, अव्यवस्थित । भौतिक संरचना, शिक्षण सिकाइ, विद्यार्थी अनुशासनदेखि लिएर हरेक कुरा अव्यवस्थित । तर २०७२ सालमा शिक्षक ईन्द्रदेव मेहताको आगमन भयो । एउटा शिक्षकको रूपमा मात्र ।
बर्जुस्थित नेरा माविबाट साहेवगन्ज सरुवा भएका उनले दुई वर्षसम्म शिक्षकमै रहेर भरपुर मेहनत गरे । मेहनतकै कारण दुई वर्षपछि उनी प्रधानाध्यापक बने । त्यसपछि सुरु भयो, विद्यालयमा गुणस्तर विस्तारको काम । अहिले विद्यालयले पाँच वर्षको अवधिमा छुट्टै परिचय बनाउन सफल भएको छ ।
विद्यालयको सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना छन्, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाई पद्धति लागू गरिएको छ अनि व्यवस्थापन पनि चुस्त छ । त्यसै कारण पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सामुदायिक विद्यालय भए पनि निजीको सक्षम प्रतिस्पर्धीको रूपमा प्रस्तुत भएपछि टाढा–टाढा सिन्धुली र सोलुखुम्बुसम्मका विद्यार्थी पढ्न आउँछन् । टाढाबाट आउनेलाई सुलभ छात्रावासको सुविधा भएका कारण सिन्धुली र सोलुका मात्र होइनन्, दाङ, झापा, सङ्खुवासभाका विद्यार्थी पनि आउँछन् ।
निःशुल्क होस्टलको व्यवस्था रहेका कारणले पनि बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थीको आकर्षण बढेको गुप्ताले बताउँछन् । ईन्द्रकै कारण विद्यालयमा आमूल रूपमा परिवर्तन आए पनि यसको श्रेय एक्लै लिन चाहँदैनन्, उनी । उनी विद्यालयका कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय र गाउँपालिकाको सहयोगका कारण विद्यालयले आफ्नो फरक परिचय बनाउन सफल बताउँछन् ।
‘म एक्ललै होइन, बरु मेरो नेतृत्वमा विद्यालयमा परिवर्तन सम्भव भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसमा व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका र स्थानीय स्वयंको पनि देन छ । मेरो बलमा उहाँहरूको होस्टेमा हैँसे छ ।’ पाँच वर्ष अघिसम्म जीर्ण अवस्थामा विद्यालयको विकासमा देवानगञ्ज गाउँपालिको ठुलो सहयोग रहेको गुप्ता बताउँछन् ।
आधारभूतबाट सुरु भएर प्राविधिक शिक्षामा जोड
अमरसिंह मावि २००७ सालमा स्थापना भई २०३४ सालदेखि निम्न माध्यमिक तहसम्म कक्षा सञ्चालन सुरु भएको थियो । यस्तै वि.स. २०४६ सालदेखि माध्यमिक विद्यालयका रूपमा स्थापना भएको सो विद्यालयमा २०६७ सालबाट प्लस टु तहको पठनपाठन सुरु भएको थियो । शिक्षा शास्त्रबाट प्लस टु सुरु गरेको उक्त विद्यालयले वि.स. २०७३ सालबाट प्राविधिक शिक्षा सुरु गरेको थियो । विद्यालयले प्राविधिकतर्फ भेटेरिनरी साथै पशुपालनसम्बन्धी पढाई सुरु गरेको हो । प्राविधिकतर्फको पढाई सुरु भएपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको प्रधानाध्यापक गुप्ताको भनाइ छ ।
२०७२ सालतिर विद्यालयमा करिब ४ सय विद्यार्थीहरू मात्र थिए । तर २०७३ सालदेखि भेटेरिनरी तथा पशुपालन विषयको पठनपाठन सुरु भएसँगै विद्यार्थीहरूको चाप एक्कासि बढेको हो । हाल विद्यालयमा कुल ८ सय ७५ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । भेटेरिनरी तथा पशुपालन विषयको अध्ययन–अध्यापनका लागि विद्यालयले विद्यालयनजिकै डेढ बिगाहा क्षेत्रफलमा बङ्गुर, बाख्रा, कुखुरा तथा हाँस पालनको तयारी गरिरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद शाह बताउँछन् ।
उनका अनुसार अत्याधुनिक डिजिटल कक्षाकोठा, बहूद्देश्यीय हल, प्रशोधित शुद्ध खानेपानी, अत्याधुनिक विषयगत प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कम्प्युटर ल्याब, खेलमैदान, मन्दिर र सुरक्षित पार्किङ स्थल विद्यालयका प्रमुख विशेषता हुन् । विद्यालयमा प्रदेश स्तरीय ल्याब समेत रहेका छन् ।
देशकै नमुना विद्यालय बनाउने चाहना
अमरसिंह माविले अहिले पनि सुनसरीकै नमुना विद्यालयको पहिचान बनाउन सफल भएको छ । तर गाउँपालिका भने यसलाई अझ विस्तार गरी देशकै नमुना बनाउने लक्ष्यमा छ । ‘प्रअ गुप्ताका कारण अमरसिंह मावि सुनसरीकै नमुना विद्यालय बन्न सफल छ, यसमा हामीले गर्व मान्नुपर्छ’, देवानगन्ज गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुडामणि गुरागाईँ भन्छन्, ‘अब यसलाई अझ चुस्त बनाएर देशकै नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य पालिकाको छ ।’
तीन करोडको लगानीमा भवन निर्माण, शुद्ध खानेपानी र कम्पाउन्डवाल निर्माणको काम सम्पन्न भएको उनले बताए । हालसालै ७ लाख रुपैयाँको लागतमा गाउँपालिकाले विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको प्लान्टसमेत जडान गरिदिएको बताउँदै उनले भने, ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, स्थानीय सरोकारवाला र गाउँपालिको भरपुर सहयोगले विद्यालयमा आमूल परिवर्तन सम्भव भएको हो ।’
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिकै भएका कारण सुरक्षा चुनौती बनेको तथा केन्द्रीकरण नभएको देखिन्छ । ग्रामीण भेगमा तथा एक कुनामा विद्यालय अवस्थित रहेको तथा विद्यार्थीलाई सुरक्षाका हिसाबले मात्र नभएर स्वास्थ्यको हिसाबले पनि चुनौती छैन ? भन्ने प्रश्नमा विद्यालयका प्रअ गुप्ता भन्छन्, ‘हामीले सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीबाट राम्रो सहयोग पाइरहेका छौँ । अझ एक जना अहेव तथा भेटेरिनरीका शिक्षकहरूबाटै पनि प्राथमिक उपचार पाइरहेका छन् । अनि ग्रामीण भेगका अधिकांश विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित रहेकाले उनीहरूलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन यस विद्यालयमा गाउँपालिकाले थप लगानी गरेको हो ।’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, साउन ४ २०७८ १८:५०:५७
सङ्कटमा महन्थ: सत्ताको पछि लाग्दा ‘यता न उता’ !
सुदूरमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्ने निजी अस्पताललाई भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरेको आरोप !
भिआइपी पाहुनालाई गिज्याउँदै धनगढी एयरपोर्ट सडक
मुक्त कमैयासँग लालपूर्जा छ, जग्गा छैन